Sony, Samsung & Other Technology: Galaxy Note3SM-N9005 (4G LTE) 4.3 Jellybean Official Firmware
Galaxy Note3SM-N9005 (4G LTE) 4.3 Jellybean Official Firmware
Samsung Galaxy Note3 SM-N9005 (4G LTE) 4.3 Jellybean Firmware တင်နည်း
အရင်ဆုံး Firmware တင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပါ။
1. Note 3(4G LTE)_SM-N9005 Jellybean 4.3 Official Firmware
ဒါလေးတွေ ဒေါင်းပြီးပီ ကိုယ့်စက်မှာ Samsung USB Driver နဲ့ Samsung Kies ရှိမရှိ အရင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ မရှိသေးရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။
အရင်ဆုံး ဒေါင်းထားတာလေးတွေကို ဖြည်ချလိုက်ပါ။ Folder တစ်ခုထဲမှာနော်။ အဲ့ Folder ထဲမှာရှိနေရမှာက Odin ကနေဖြည်ချထားတဲ့ File ၂ ဖိုင်ရယ်၊ Firmware ကနေဖြည်ချထားတဲ့ File ၂ ဖိုင်ရယ် ရှိနေရမှာ။ ရှိပြီဆိုရင် တော့ အဲ့ထဲက Odin3 v3.09.exe ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
AP = PDA ပါ။ အရင်က PDA နေရာမှာ AP ဆိုပြီးပြောင်းသွားတာပါပဲ။ Odin Version မြင့်သွားလို့ပါ။
Firmware ကို အရင်နည်းအတိုင်း ပဲတင်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ Recovery Mode ထဲဝင်ပြီး Factory Reset တွေ Wipe Cache တွေ လုပ်ပြီး Reboot System Now နှိပ်ပေးရုံပါပဲ။
Firmware တင်နည်း မသိပါက > > အရင်နည်းအတိုင်း ကို Click ပြီးသွားကြည့်လိုက်ပါ။
thigh wanna October 23, 2013 at 6:12 AM
This firmware can use myanmar font?
yes, but no buildin myanmarfont. u can root and install burmese font manually
If u want to use myanmar font u can download note3thai firmware. That's fw also mm font already. But zawgyi no unicode. Why I can talk to u exactly cause I already upgraded. My phone is note3LTE support when I buy in Dubai. That's why I can't use mm font. But 1 day I read the article and than I download note3thai language fw and upgrade, is ok and easily to type and see mm zawgyi font anywhere. No need to root. But you have also download and install note3support flip font. If u don't have flip font u can't type mm font. If u want to get note3thai language fw version 4.4.2 please contect me.
natsinkayin November 4, 2013 at 8:36 AM
how to root and install burmese font manually?
For Note3 4G LTE (SM-N9005) Please see this link>>> http://sony-samsung.blogspot.com/2013/10/galaxy-note-3-official-43-root.html
natsinkayin November 4, 2013 at 8:41 AM
I mean build in myanmar font,(how and where to get build in myanmar font?which myanmar font is suitable font for Note III
U can get only build in myanmar font in SM-N900, not in SM-N9005....... Note III 4G LTE (SM-N9005) not avaliable build in myanmar font>> if u've SM-N900 >> see this >> http://sony-samsung.blogspot.com/2013/10/galaxy-note-3-sm-n900-original-firmware.html
ပြွန်တန်ဆာ November 17, 2013 at 11:28 AM
Hotfile ကို resume လင့်ရမယ် လုပ်နည်းလေးရှိရင် တင်ပေးပါလား ဒေါင်းရတာအဆင်မပြေလို့ပါ။
www.trunkize.com မှာ Register လုပ်လိုက်ပါ။ Facebook နဲ့.. Resume ရသွားပါမယ်
LinNaing November 26, 2013 at 2:48 PM
ဖိုင်က download ပြီးခါနီမှာ Error တက်နေပါတယ် ပြန်စစ်ပေးပါဦး....
it may be ur connection.. :)
LinNaing November 27, 2013 at 12:21 PM
ကို ကောင်းမြတ် download က အဆင်ပြေသွားပါပီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ SM-N900 ဆိုတဲ့ Builtin Myanmar Font ပါတဲ့ Firmware က system တစ်ခုလုံး မြန်မာစာ ပါတာကို ပြောတာလား၊ LTE, TM, 4G တခြားအမျိုးစားတွေ တွေ့ပါသေးတယ် မမှတ်မိတော့ဘုး အဲဒျါေတွက ဖုန်းမှာ ကြည့်လို့ရလား ဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမလဲ၊ ကွာခြားပုံလေးတွေ ရှိရင် ရှင်းပြပေးပါဦး ဖတ်ရမယ့် လင့် ရှိရင်လဲ ပေးနိုင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါဦး
Unknown November 27, 2013 at 12:36 PM
SM-N900 Firmware က Buildin မြန်မာစာစနစ်ပါပြီးသားပါ။ တစ်ခြား ဒီမှာ တင်ပေးထားတဲ့ SM-N9005 က မြန်မာစာ Buildin မပါပါဘူးး ...
SM-N900 က ရိုးရိုး 3G အလုံးပါ
SM-N9005 က 4G LTE ပါ
LinNaing November 27, 2013 at 1:06 PM
အခု ကျနော် ဖုန်းက s3 root ပြီး myanmar font ထည့်ထားတာ အဆင်ပြေပါတယ်၊ keyboard က ပထမ pro myankey ကိုသုံးပါတယ် အခု အဲဒီ pro myankey က 20-11-2013 လောက်ကထင်တယ်ဗျ တခါရိုက်ရင် keyboard က တခါပျောက်နေတယ် အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ၀ယ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင်လဲ လိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်လိုဝယ်ရမှန်းမသိလို့ သိရင် ကူညီပေးပါဦး error ဖြစ်နေရင်လဲ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ကူညီပေးပါဦး
Frozen Keyboard ကို သုံးပါ
ကျွန်တော့် ဖုန်းက SM-N900 ပါ မြန်မာစာ စနစ် buildin မပါဘူးလား မသိဘူး ရှာလို့လဲမတွေ့ဘူး
baseband version N900XXUBMI2 ပါ Build Number JSS15J.N900XXUBMJ1 ပါ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲမသိဘူး အဆင်ပြေရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါလား ။
root လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လဲ မြန်မာfont ထည့်နည်းလေးပါ ဖြေပေးပါအုံး ။
FLASH CWM & INSTALL SSOT_LGNPACKNFONTkb.zip
u can get build in MM FONT
SETTING > Language & INPUT > LANGUAGE > Myanmar (Zawgyi)
Enable Frozen Keyboard to Type Myanmar Font & Enjoy
ကိုကောင်းမြတ် ကျွန်တော့်ဖုန်းကို THl မြန်မာစာ built in ပါတဲ့ firmware တင်လိုက်ဒါ မြန်မာစာ မမှန်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး ။note3N900 ပါ။ မြန်မာစာ built in ပါပြီး မြန်မာစာ မှန်တဲ့ firmware ရှိပါသလား။ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာရောတင်လို့ရပါသလား။ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ဖြေပေးပါအုံး။ရှိခဲ့ရင် download လင့်လေးပါပြောပြပေးပါ။ ဒါနဲ့ thl myanmar built in firmware က မြန်မာစာဘါလို့မမှန် ဒါပါလဲ ။ ကျွန်တော့် ဖုန်းမှာ မှ မမှန်ဒါပါလား ရှင်းပြပေးပါအုံး။